Ungayisetha kanjani i-Apache virtual host ku-Debian | Kusuka kuLinux
Ungayisetha kanjani i-Apache virtual host ku-Debian
Siyaqhubeka nokudlala noDebian kuseva yethu yokuhlola, namuhla sanikezwa isidingo sokumisa i-Virtual Host, ngakho-ke ngosizo lomhlahlandlela waseyunivesithi ngakha igxathu negxathu ukulungisa ama-Apache virtual host kuDebian.
1 Faka i-apache
2 Dala ifayela elisha le-Virtual host
3 Nika amandla amafayela wokubamba we-Virtual amasha:
4 Qala kabusha i-Apache:
5 Lungiselela ifayela labasokhaya bendawo
Dala ifayela elisha le-Virtual host
Landa ifayela lethu lokuhlola virtual.conf kusuka ku- lapha. Ngemuva kwalokho kufanele sikopishe ifayela virtual.conf kufolda /etc/apache2/sites-available/ kwesizinda esisha.
Uma kudingeka, singashintsha igama lefayela. (Ukuhlola sizosebenzisa igama: virtual )
Okulandelayo kufanele sishintshe izinkambu ezilandelayo ServerName, ServerAdmin, DocumentRoot
Nika amandla amafayela wokubamba we-Virtual amasha:
Qala kabusha i-Apache:
Vula ifayela hosts yalo thayipha nano /etc/hosts
Faka i-IP entsha yeseva yakho ezansi kwefayela njenge-localhost.
Kuzoba yinto enjengale:
127.0.0.1 localhost 127.0.0.10 wp 127.0.0.11 yii # Imigqa elandelayo iyadingeka kuma-host ane-IPv6 :: 1 localhost ip6-localhost ip6-loopback ff02 :: 1 ip6-allnodes ff02 :: 2 ip6-allrouters
Ngalokhu, i-Virtual Host eDebian izolungiswa kahle
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ungayisetha kanjani i-Apache virtual host ku-Debian
Uyacelwa ukuthi ngikubuze okokufundisa lapho uchaza khona ukuthi kusuka kwi-Intanethi (noma yikuphi emhlabeni) ungafinyelela kanjani amakhasi we-virtual host ngaphandle kokusebenzisa amasevisi avela eceleni?
Isixhumanisi se-virtual.conf asisebenzi.
UJohan Esteban kusho
Okokufundisa akuphelele 0/10
Phendula uJohan Esteban
ifayela le-virtual.conf ngeke lisalandwa. Sicela ubuyekeze isixhumanisi.
Ayikwazi ukufinyelela ukunamathisela kusuka ku-virtual.conf. Yebo, ukukhangisa, ingubo ...